I-DVI kunye neVGA Cables
I-MiniDP kunye ne-DP Cables
Iintaba zeNtaba zePaneli
Intambo ye-USB-C kunye neeadaptha
Izixhobo zeFowuni yeeFowuni
Ukutshaja iiKhowudi zeDatha
Kutheni ukhetha iAgalink
Ingaba iintambo zakho RoHS okanye OKUPHUMEZA Compliance?
Ewe, zonke iimveliso ukususela Umateck luyahambelana na RoHS (Ukuncitshiswa inkunkuma) kunye FIKELELA (Ubhaliso, Evaluation, zoGunyaziso, nokubotshelelwa Izinto eziyimichiza), Siya kukwazi iingxelo zeemvavanyo ekubonelelwe ngayo izinto zonke iimveliso ezisetyenzisiweyo. Kwakhona ukwazi ukunika intetho ukuqinisekisa imveliso Wasithenga ke RoHS okanye OKUPHUMEZA ukuthotyelwa. Qha ngoku ukufumana isibhengezo okanye uvavanyo iingxelo.
njani quick i ukufumana umnikelo kuwe?
ebuza yakho iphendulwe kwisithuba seeyure ezi-2 ngexesha emsebenzini, xa besemsebenzi okanye eholideyini na, siyakwazi ukuphendula kuwe kwisithuba seeyure ezingama 24. Ukusebenza lo kuqala yethu.
Ngaba ukunika iisampuli FREE ukhangela ubulunga?
Ngokuqinisekileyo, ukwazi ukunika isampuli msinya ukuba umxhasi kokuhlola umgangatho thina, iisampulu ngokuqinisekileyo simahla, kodwa iindleko yokuthumela kufanele wena, ukuba uya kuba mkhulu, ukuba unako unganikeza-akhawunti yakho yenethiwekhi.
MOQ yethu oluqhelekileyo iiPC 1000 into nganye okanye intambo ngokupheleleyo 3000 imitha ekrwada iinkcukacha ngamnye umbala omnye. sokubambisana lokuqala, siya ngaphezu ukuba amkele umyalelo wakho kwetyala ezifana iiPC 1oo okanye iiPC 200. kwaye ukuba sibe sokubambisa, siya kukwazi ukuba athengise ubungakanani encinane na kuni, pls uqhagamshelane nathi ukuba usixelele ukuba iinkcukacha zakho mfuno.
njani ekhawulezayo ukuba athumele iintambo ukuba i-odola ngoku?
Oku kuxhomekeke iinkcukacha zakho, ubungakanani kunye package..etc, lethu ixesha phambili oluqhelekileyo ziiveki 3-4, ukuba umyalelo nobungakanani encinane kwaye abanezinto kwi impahla, nako ukuthumela yona wethu kwiiveki 1-2 thina. Siyakuvuyela ukwenza ephambili Imfuno engxamisekileyo, nceda usazise nje usazise target.
Ngaba unikela iindleko isisombululo yokuthumela olusebenzayo kuthi?
Ewe, kufuneka namaqabane eqhinga on Sea, umoya kunye nokuthumela express, ixabiso sinako ukunikela inokhuphiswano kakhulu.
Indlela ukuhlawula, yintoni na igama lakho?
ixesha lethu intlawulo eqhelekileyo yi-30% idipozithi, kunye nokulungelelana ngokuchasene B / L, sinikezela ngetyala evulekileyo iintsuku ezifana OA30 / 45/60 ngenxa kakuhle wavuma abathengi kunye nemali oda ngentla 30,000 USD. T / T, L / C, PayPal, Western Union ... njalo ziyafumaneka bonke.
Ngaba wena imveliso kuthi?
Ngokuqinisekileyo, sigqalisela OEM iintambo ekhokhelwa brand elungileyo, akukho imodeli umcimbi, ukupakisha okanye ubude esingabizi, umbala, senza le mveliso ngqo nileswi nokuswela kwakho, nje ukuba uqhagamshelane nathi ukuba iintambo wena kunye uphawu yakho.
Content wakho ingena Apha
Cela A Quote Quick. Ungafumana i ingxelo kwisithuba seeyure ezingama-24. Thembisa!
Idilesi: Igumbi 907, South Tower, 288 Xilu Road, Zhenhai, Ningbo, China. 315201
© Ilungelo lokushicilela 2012-2019 Agalink.com | Onke amalungelo agciniwe Ixhaswe nguNingbo Farsince Electronic Co, limited